ပွၚစီဆွံစီၚအဥတိဥနံဥလ႕ ပဥဒူအဥအဂ့ႈႈ ၁၃’၆’၂၀၂၀
ပွၚစီဆွံစီၚ Anthony အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ကီႈ Portugal အ၀့ႈ Lisbonယ ဒီးအမံၚအဆိကတ႕ႈမ့ႈ၀ဲ Fernando Martins, ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕ ပွၚထူးပွၚတီၚအဒူဥဖိထ႕ဖိနဥ့လီၚ’ ဖဲအသးအိဥ၀ဲ ၁၅ နံဥအကတီႈ စးထီဥမၚလိမၚဒိးအသးလ႕ ဎြၚဂ့ႈပီညါ ဒီး Latin အက...
ပွၚစီဆွံ စီဘးနဘး ၁၁’၆’၂၀၂၀
ဒီပုႈ၀ဲႈပွၚဒိကနဥတႈဖိသ့ဥဧ႕ယ တနံၚအံၚ ပကဒိကနဥသကိးဘဥ၀ဲ ပွၚစီဆွံ စီဘးနဘး အဂ့ႈန႔ဥလီၚ’ ပွၚစီဆံွ စီၚဘးနဘး တပဏဃုဏ ၀ဲလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိ ၁၂ ဂၚ အက်ါဘဥဆဥ အတႈအိဥမူ ဒီးအတႈဖံး တႈမၚတဖဥ မ့ႈဒ္ပွၚတႈမ႕ဖိ တဖဥအသိး ဒိးန႔ႈဘဥ တႈစီဆွံကစႈဒီး မၚ၀ဲ တႈသးခုကစီဥ အတႈဖံး တႈမၚ သ့ဥတဖဥ န႔...
May,25th, 2020 is 1st Year Ordination Anniversary of Fr. Seraphine. 9,6,2020
စီဆွံ ကေ႔ဥစတံ (မးထူရဥ) ၁’၆’၂၀၂၀
တနံၚအံၚဒ္အမ့ႈ၀ဲ စီဆွံ ကေ႔ဥစတံ (မးထူရဥ) အမုႈဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ သတးဒီး သးအိဥပဏဖ်ါထီဥဘဥဎဲ စီိဆွံ ကေ႔ဥစတံ အဂ့ႈန႔ဥလီၚ’စီဆွံကေ႔ဥစတံ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕ အဆိကတ႕ႈ ၾတီဆ႕မၚန႕ၚန႔ႈက့ၚ ဘဥဃး တႈစူႈနဏ ခရံဏ န႔ဥလီၚ’ ဖဲခရံဏနံဥ ၁၀၀ အကတီႈ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ဆဥမဥရံဎါ အပူၚ ပွၚတစူႈနဏဎြၚ...
မိႈပႈဖံဖုဒီပုႈ၀ဲႈဒီးတံၚသကိးခဲလ႕ဏသ့ဥသုဧ႕ယမ္သုကဘဥထီဥဘိတက့ႈ မ့ႈဎတႈဆ႕ဂ့ၚဘဥသုန႔ဥလီၚ’ တနံၚအံၚမ့ႈ၀ဲစီဆွံမုဥနီႈရံဥတါ အမုႈဘူဥနံၚန႔ဥလီၚ’ ပွၚစီဆွံမုဥ နီႈရံဥတါ မ့ႈ၀ဲပွၚမုဥကမဲ တဂၚန႔ဥလီၚ’အ၀ဲ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ကီႈအံးတလံး ရိဥဂဥပိးလဲနၚ အပူၚဖဲခရံဏနံဥ ၁၃၈၁ အခါ န႔ဥလီၚ’...
မိႈပႈဖိဖုဒီပုႈ၀ဲႈဒီးပွၚဒိကနဥဖိသ့ဥဧ႕ယမ္သုကဘဥမုဏထီဘိတက့ႈမ့ႈ ဎတႈဆ႕ဘဥသုန႔ဥလီၚ’ တနံၚအံၚ လါမ့ၚ အသီ ၂၀ အနံၚအံၚ မ့ႈ၀ဲ မုႈနံၚလ႕ ဘဥတႈမၚလၚကပီၚက့ၚယစီဆွံ ဘ့ဥနဒ့နိဥ အမုႈနံၚန႔ဥလီၚ’ စီဆွံ ဘ့ဥနဒ့ မ့ႈ၀ဲသီခါတပါန႔ဥလီၚ’ ဘ့ဥနဒ့ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ကီႈအံးတလံး မဥဆဥ မဥရံဥတံႈမ...
ပွၚထူျပ႕ဖ်႕ဥထူ ဖိလ႕အကဲထီဥက့ၚသီခါ လ႕အမ့ႈ Chase Hilgenbrinck အံၚအိဥ၀ဲဒဥလ႕ ကီႈ(America) အံၚလံၚနြဲဥကီီႈစဲဥ ကြ႔စံၚအ၀့ႈပူၚ ဒီး အိဥဖ်ဲဥထီဥဖဲ ၁၉၈၂ နံဥ လါအ့ျဖ့ဥ ၂ သီအနံၚန႔ဥလီၚ.